Iindaba -Izibane zomlilo zeKhandlela
Imisebenzi yomlilo yamakhandlela ikhekhe ikwabizwa ngokuba yimililo encinci ephathwa ngesandla. Xa zisetyenziswa, zifakwa kwikhekhe (okanye zibekwe ngesandla sakho) kwaye zitshiswe ngomlilo ovulekileyo ukuze kuqhume izixhobo zomlilo zesilivere.
Ubude beziqhushumbisi eziqhelekileyo zekhekhe zili-10cm, 12cm, 15cm, 25cm kunye nama-30cm. Ixesha lokutsha lisusela kwimizuzwana engama-30 ukuya kwimizuzwana engama-60. Ukupakishwa kwangaphandle kwezikhuselo zomlilo ngekhekhe ngokwesilivere, igolide kunye nokupakisha imibala eyahlukeneyo. Iziqhumane zekhekhe zilungele imithendeleko, imihla yokuzalwa kunye nezinye izihlandlo. Kulula ukusebenza, zikhuselekile kwaye zinobuhlobo kokusingqongileyo.
Ubomi beshelfu yale mveliso yiminyaka emi-2-3 kwindawo eyomileyo.
Ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa komlilo ikeyiki:
Amafutha amancinci aphethwe ngesandla.
Yimveliso yelangatye ebandayo enokhuseleko oluphezulu. Kuyafaneleka kwiimeko ezahlukeneyo: imitshato, imihla yokuzalwa kunye namaqela. Iikhekhe zomlilo ezibandayo eziphathwe ngesandla zezona zinto zoqoqosho zibalaseleyo kwimibhiyozo yemihla yokuzalwa kunye namaqela eentsuku zeveki. Inika ukukhanya okumhlophe, esona sitshixo sokunikezela imeko yomoya